Dhaamsa hatattamaa fi baayyee barbaachisaa Waliif dabarsaa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa hatattamaa fi baayyee barbaachisaa Waliif dabarsaa!
Toftaa fi qajeelfama loltootaa Itiyoophiyaa, Eritraa fi Humna Addaa Amaaraa Wallaagaa fi Shawaati duulaa jiran
1. Loltooni WBO adamsuuf bobbaafaman meeshaa akka malee ammayawaa kan qabaan yoo ta’uu, marga fi baalaa mukaa ofittii diruun mukaa fakkatani bobba’aa akka jiran beekamu qaba. Toftaa kana warri bosona keessa sakata’aaf socho’u hundi akka fayyadamu jedhamee jira.
2. Suuralee iddoowwan gara garaa mulisuu kan kana dura miseensoni WBO suuraa itti ka’aani social middiyaa gubbaa asii achi deemaa ture irraa haalan xiinxaluun bakka baayyee addaa baafataniruu. Sochiin isaani GPS irrati guutamuun bakkeewan kana irrati xiyyeefate jedhamee jira.
3. Teeknolojii fi loogistikii waraana Izii dhihaa akkaa jiruuti garaa sakatta’iinsa fi lola WBOti dhimma ba’uuf murtoon darbee jira. Kana jechuun Teeknolojii fi loogistikii hidhaa Abbayaalee ittiin eegaa turan baayyee isaa gara sanati fayyadamuuf sochoosani jiru.
4. Sochii WBO salphaati addaa baafachuuf Kameerawwaan fi Manatsarii waraana Israel irraa argatan garas qabatani deemaa jiru.
5. Meeshaa Bireenii rasaasaa saanduqaan baatu fudhatani deemaa jiru.
6. Isiinayipeerii guguddaa KM 2 irratti rukutuufaa kan qabatanis keessa jiru.
7. Yeroo WBO lafa diriiraattii ba’ee Eleekoptariin guyyaa rukkutuuf ‘standby’ ta’aniruu.
8. Bakka tokko tokkooti kallattiidhaan WBO irrati waraana banuu isaani dura nyaataa fi dhugaatii irraa kutuun achi booda erga dadhabsisaani bodee humna cimaadhan akka itti bahanii lolan kalatiin kaahameefi jira.
9. Akka Siyume Masfiinfaa ajjeesan san Jaal Marroo dabalatee caraa arganaan hoggaantootaa WBO ajjeesuufis ergamni cimaan itti kennamee jira.
10. Hangaa waraanni kun dhumuttii namni tokkoo illee suuraa ka’ee maxansuu fi vidiyoo waraabee maxansuu itti fufa taanan salphaati bakka san addaa basuun sadarkaa itti duuluun danda’amurrati hojiin hojjatamee jira.
11. WBOn yoo waraana kana injifaatee ykn yoo lubbuu namootaa xiqoon qofaa aarsaa godhee waranichaa xumuuree waggaa muraasaa keessatti biyyati to’aachuu waan danda’uuf waraanni kun kan akkaa ijjibbaataa isaa dhuumattii, bajataa guddaa fi beekumsaa guddaan qophahee bobbafameraa.
12. Nama rifneesa isaa guddifatee socho’u hunda yeroo argan ni shaku taanan gaafii tokko malee itti dhukaasani akka ajjeesan itti himamee wan jiruuf uummani fi qeerroonis akka ofeggaannoo cimaa godhan haa ta’u.»
Abdo qadii irraa
የግብፅ የጦር ጀቶች በአባይ ሰማይ፣ “4000 ወታደሮች ይውጡ” ሱዳን፣ “ጦሩ ኦሮሚያ የለም” ኤርትራ፣ ሟቾቹ 100 ደረሱ፣ የመንግስት መግለጫ ስለግድቡ| EF
Oromiyaa keessatti tooftaalee Bobbaa waraana Eertiraa(Shaabiyaa)!!